ट्राफिक प्रमुखलाई प्रश्न– मोटरसाइकलमा श्रीमान्–श्रीमती भए के गर्नुहुन्छ ? – The Public Today
ट्राफिक प्रमुखलाई प्रश्न– मोटरसाइकलमा श्रीमान्–श्रीमती भए के गर्नुहुन्छ ?
विजय कुमार सिंह जेठ ३२, २०७७ ११:१० am
झापा, जेठ ३२ गते : सरकारले मोटरसाइकलमा चालकमात्रै चढ्न पाउने नियम लागु गरेसँगै त्यसको विरोध जारी छ । सरकारी निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि स्वयम् ट्राफिक प्रहरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । लकडाउन कडा भएको बेला मोटरसाइकलमा दुईजना सवार हुँदै आएको तर खुकुलो भएको अवस्थामा एकजना मात्रै सवार हुने निर्णय अव्यावहारिक भएको धेरैको बुझाइ छ ।
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका अनुसार आइतबार बिहान १० बजेसम्म मात्रै विजोर र दुईजना चढेका ३०९ सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जसमा मोटरसाइकलकै संख्या बढी छ । कतिपयलाई मोटरसाइकल चलाउन नआउने, कार्यालय पुर्‍याउन जानुपर्ने, आपतकालीन अवस्थामा दुईजना जानुपर्ने अवस्था छ ।
महाशाखा प्रमुख एसएसपी ढकाल आफूहरुको जिम्मेवारी सरकारले दिएको आदेशको पालना गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो भए मोटरसाईकलमा श्रीमान्–श्रीमती नै भए के गर्नुहुन्छ त ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा एसएसपी ढकालले भने, “अत्यावश्यक कामका लागि निस्किएको भए हामी विवेक प्रयोग गर्छौँ । बिरामी, अस्पताल जाने विषयमा रोकतोक हुँदैन । तर अरु विषयमा सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।”
सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीले उल्ट्याउन भने सक्दैन ।
राजधानीका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले दुईजना चढेर आएकामध्ये एकजनालाई फर्काइदिएको छ भने कतिपय स्थानमा नियम मिचेको भन्दै मोटरसाइकल होल्डमा समेत राखिँदै आएको छ ।
लकडाउन जारी भएपछि ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक जरिवाना रोकेको छ । तर होल्डमै दिनभर मोटरसाइकल राखिदिने गरेको कतिपयको गुनासो छ ।
एक ट्राफिक प्रहरी भन्छन्, “परिवारका सदस्य सँगै खाना खादा, सुत्दा बस्दा कोरोना नसर्ने तर घरकै सदस्य एकै मोटरसाइकलमा जाँदा कसरी कोरोना जोखिम कम हुन्छ ? अर्कोतिर सार्वजनिक सवारी चलेको छैन । अनि कार्यालय, काममा जानुपरे कसरी जाने ? यो त निकै अव्यावहारिक भयो ।”
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नभएर देशका विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकल बारेको निर्णयले समस्या निम्त्याएको छ । शुक्रबारबाट देशभर मोटरसाइकल र निजी सवारीमा जोर मितिमा जोर र बिजोर मितिमा बिजोर प्रणाली लागु गरिएको थियो । बाह्रखरी